Ny lalao hazakazaka 10 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Araka ny efa fantatrao, misy lalao maro hisafidianana ao amin'ny Android univers. Mandehandeha fotsiny manodidina ny Play Store mahalala Ka amin'ny fotoana maro dia sarotra ny mitady lalao izay tena tiantsika. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, mitondra safidy lalao avy amin'ny karazana iray izay nanjary nalaza be izahay nandritra ny taona maro.
Miresaka momba ny lalao hazakazaka izahay. Izy io dia karazana lalao iray izay malaza be amin'ny Android. Raha ny marina, isaky ny mahita lalao bebe kokoa amin'ity karazana ity isika. Noho izany, nanapa-kevitra izahay mifantina ny sasany amin'ny tsara indrindra lalao amin'ity karazana ity ho anao. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
Safidy ahafahantsika mahita anaram-boninahitra malaza eran-tany. Saingy, izany dia natao tamin'ny hevitra fa afaka mahita safidy iray izay tianao ianao. Inona avy ireo lalao eto amin'ity lisitra ity?
1 Mila haingam-pandeha: tsy misy fetra
6 Grand Prix Tantara
7 GT Racing 2 Ny tena traikefa amin'ny fiara
9 Fanaviana hazakazaka
10 Hot Wheels: Foko Off
Mila haingam-pandeha: tsy misy fetra
Manokatra ny lisitra izahay miaraka amin'ny a anaram-boninahitra malaza eran-tany. Lalao video izay namboarina tamin'ny fitaovana Android. Mety ny lalao hazakazaka quintessential eny an-tsena. Nifindra tany a boriborintany mihazakazaka ambanin'ny tany. Ny andraikitsika dia afa-mandositra ny polisy amin'ny fotoana rehetra. Ankoatry ny fiatrehana mpanamory fiaramanidina hafa no tena tadiavina.
Tokony hataontsika mahay mampiasa ny enti-manana amin'ny fotoana rehetra, mba hahazoana ampahany hanovana ny fiaranay. Ilaina ny manasongadina ny sary mahafinaritra izay ananan'ny lalao, izay tsy isalasalana fa manampy antsika hiditra amin'ilay tantara. ny maimaim-poana ny fampidinana lalao, na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Mila haingam-pandeha: NL Las Carreras
iray hafa Saga misy fahombiazana lehibe manerantany amin'ny fitaovana Android. Miatrika ny iray amin'ireo lalao hazakazaka tsara indrindra eto an-tsena izahay. Tsy maintsy asongadintsika ihany koa ireo sary mahafinaritra, izay manome ny zava-misy sy ny hetsika. Ankoatra ny fiara isan-karazany lehibe azontsika safidiana, misy 60 ny totaliny. Ary fitambarany hetsika 180 ao. Ankehitriny dia ampidirina ihany koa ny fiara Hot Wheels.
Iray aminy tombony lehibe dia ny manana fomba lalao isan-karazany isika, ao anatin'izany ny mode multiplayer ho anao hifaninana amin'ireo namanao. ny maimaim-poana ity fampidinana ity lalao ity, na dia mividy ny ao anatiny indray aza isika.
Azo antoka fa anaram-boninahitra tena mahaliana izy io. Ny manamarika indrindra dia ny zava-misy misy mihoatra ny 2.000 ny fitsapana samihafa amin'ny lalao. Ka afaka milalao mandritra ny fotoana lava be isika ary mahita porofo vaovao foana. Ho fanampin'izany, manana ny fahafaha-manao c isikafiara manerantany amin'ny boriborintany tena izy. Izay mampitombo be ny fihetsem-po sy ny zava-misy amin'ity lalao ity.
ankehitriny misy fiara eo amin'ny 150 eo ho eo ao amin'ny lalao. Ary koa, ny lalao dia havaozina tsy tapaka. Ka misy foana ny fiara vaovao, ny fizaran-tany vaovao ary ny fitsapana vaovao. ny maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android, na dia toy ny amin'ny lalao hafa aza dia mahita fividianana ao anatiny isika.
Ny andiana lalao CSR Racing dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka lalao hazakazaka ho an'ny Android. CSR Racing 2 dia lalao hazakaza-pihetseham-po mampientam-po izay azonao atao mifaninana «mivantana amin'ireo mpilalao manerana an'izao tontolo izao amin'ny supercar mahazatra anaoao anatin'izany ny LaFerrari, McLaren P1 ™, Koenigsegg One: 1 ary maro hafa. '
En CSR Racing 2 (Maimaimpoana amin'ny fividianana fampiharana) azonao atao ny mividy fiara, manamboatra azy ireo ary manavao azy ireo, hankafizanao amin'ny hazakazaka tsy mampino amin'ny sasany Sary 3D mahatalanjona.
Ho gaga ianao amin'ny haavon'ny pitsopitsony feno amin'ny atin'ny fiara tsirairay, ao anatin'izany ny toeran'ny mpanamboatra tany am-boalohany. Tsy hahita zavatra azo antenaina kokoa ianao!
Novolavolain'ny Gameloft malaza, asfalta Xtreme Lalao maimaim-poana izany fa manolotra fividianana anaty-rindrambaiko izay hanatsara ny zavatra niainan'ilay mpilalao. Amin'ity lalao ity hifaninana ianao amin'ny alàlan'ny karazana hazakazaka isan-karazany sy amin'ny fiara maro karazana. Misy fiara 35 amin'izao fotoana izao mandrakotra sokajy fito samy hafa, na dia hanampy bebe kokoa aza ny orinasa amin'ny ho avy. Ho fanampin'izay, ao amin'ny asfalta Xtreme afaka mankafy hazakazaka multiplayer an-tserasera koa ianao, hazakazaka fotoana voafetra ary maro hafa.
Asphalt Xtreme: hazakazaka famoriam-bahoaka
Grand Prix Tantara
Raha mitady traikefa tena misy ianao dia tsy anjaranao ity fa miatrika lalao hazakazaka hafa ho an'ny Android novolavolain'i Kairosoft, vondrona fantatra amin'ny fanaovana lalao fanahafana tsotra sy mihoa-pampana.
Ao amin'ity lalao simulation ity ianao no ho lohan'ny ekipanao manokana izay hamela anao hampiofana mpamily, hahazo mpanohana ary handresy hazakazaka maro araka izay tratra.
GT Racing 2 Ny tena traikefa amin'ny fiara
GT Racing 2 dia lohateny Gameloft hafa, tsy malaza tahaka ny andiany Asphalt, na izany aza dia lalao fifaninanana hazakazaka izay anananao Fiara 71 avy amin'ny mpamokatra 30 mahery (Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Nissan, Audi, Ford ary maro hafa) hifaninana amin'ny lalana 13, hetsika maherin'ny 1.400, ao anatin'izany ireo fanamby isan-kerinandro. Afaka manao izany koa ianao mifaninana amin'ny fotoana tena izy amin'ny mpilalao hafa.
GT Racing 2: lalao fiara
Hill Climb Racing 2 dia iray amin'ireo lalao hazakazaka vaovao indrindra ho an'ny Android izay miorina amin'ny sary maro loko sy fifehezana tena tsotra.
Tsy maintsy miakatra sy midina havoana ianao fa mora kokoa noho ny tena izy ny toa azy. Azonao atao koa ny manamboatra ny fiaranao, mandahatra azy ireo hitondra tena amin'ny fomba iray, ary maro hafa. Ary mazava ho azy, manana fomba multiplayer an-tserasera, zava-bita, asa isan'andro, fanamby ary maro hafa izy.
Fanaviana hazakazaka dia lalao fifaninanana amin'ny tontolo iainana efatra hifaninanana, hazakazaka efatra, takelaka misy mpitarika, ary maody mihetsika miadana izay manamora kokoa ny fanaovan-tsoa. Misy koa a maody multiplayer an-tserasera Ary mety raha mitady lalao ianao izay tsy "tena mihazakazaka" toy ny sasany tamin'ireo efa notanisainay ireo.
Hot Wheels: Foko Off
Ilaintsika ireo lalao nentim-paharazana vao maika miroso amin'ny lalao tany am-boalohany indrindra. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mitondra fiara ny iray amin'ireo fiara malaza Wheels Hot Wheels. Miatrika fiara hafa isika amin'ny hazakazaka mifanesy. Ny tanjontsika dia ny mahatratra ny tsipika fahatongavana nefa tsy nivadika ny fiara. Ny zavatra izay, araka ny ho hitanao, dia tsy asa tena tsotra.
Lalao mahafinaritra sy somary adala. Izy io dia manana sary tsara, izay tsy isalasalana fa manampy ny lalao hahazo bebe kokoa amin'ny hazakazaka amin'ny fotoana rehetra. Maimaimpoana ny fampidinana lalao, saingy hitantsika fa misy dokambarotra ao anatiny, ankoatry ny fividianana.
Developer: Lalao Hutch
Izany dia ny safidinay amin'ny lalao hazakazaka tsara indrindra ho an'ny Android. Betsaka ny lohateny azo alaina ankehitriny. Amin'ny ankapobeny ny fampandehanana ireo lalao ireo dia tena mitovy, na dia amin'ny ankapobeny aza ny sary dia ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ankamaroan'izy ireo. Antenainay fa nahaliana anao ity fifantenana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao hazakazaka 10 tsara indrindra ho an'ny Android